News: "dopo un arresto cardiaco sono stata in Paradiso, vi racconto com'è" | Ilblogdellapreghiera
News: "mgbe ejidechara obi m mgbe m nọ n'eluigwe, aga m agwa gị otu ọ dị"
Paolo Tescione	Edere ya Maggio 2, 2020 Maggio 2, 2020
Otu ụbọchị na Septemba, Charlotte Holmes lere anya n’elu ka ndị ọrụ ụlọ ọgwụ iri na abụọ gbara àkwà ụlọ ọgwụ ya ọgụ ma jiri ọgụ lụọ ọgụ iji kpọlite ​​ya n’ọnwụ. Otu onye ọrụ gburu ikpere n'ala kpuchie ya n'elu àkwà, na-ekesa mkpakọ obi ebe ndị ọzọ na-a drugsụ ọgwụ, na-emegharị mmezi, ma na-akpọ ọgụgụ. N'ime akuku nke ime ụlọ ahụ, Charlotte hụrụ di ya Danny ka ọ na-ele, naanị ya ma ụjọ.
Mgbe ahụ, ọ gbusiri isi otụ na-egbu egbu nke ọ dị mbụ. Eluigwe meghekwara nke ahụ. Charlotte, onye ya na Danny biri na Mammoth ruo afọ 48, agara ụlọ ọgwụ ụbọchị atọ tupu mgbe ahụ na Cox South Hospital na Springfield mgbe ọ gachara dọkịta ya na-eme nyocha oge niile ma ziga ya ozugbo n'ụlọ ọgwụ mgbe ọbara mgbali ya. ọ mụbara site na 234/134.
Ọ sịrị, "Enwere m nsogbu mgbe niile na ọbara mgbali m. Agaala m ụlọ ọgwụ ugboro abụọ ma ọ bụ atọ tupu mgbe ha tinyere m na usoro ọgwụgwọ IV iji mee ka ọ daa," ka o kwuru. “Oge ahụ, na Septemba, anọ m ebe ahụ ụbọchị atọ, esorowo m ndị na-enyocha obi niile. Ha justụrụ m sapoji akwa m n’elu ihe ndina m, ha na-eyikwa uwe ọyịfụma dị ọcha mgbe ọ mere. Echetaghị m ihe ọ bụla nke oge ahụ, mana Danny kwuru na m adaala, otu n'ime ndị nọọsụ ahụ wee sị, "Oh Chineke m. Ọ naghị eku ume. ""
Danny mechara gwa ya na anya ya sara mbara ma ọ dị ka ọ na-ele anya. Nọọsụ ahụ gbapụrụ n'ọnụ ụlọ ahụ wee kpọọ koodu, na-eduga ìgwè ndị ọrụ ahụ ike gbabara n'ime ụlọ ahụ. Otu onye bilitere n’elu akwa ma malite mkpakọ.
"Echere m na agaghị m akpọrọ gị laa n'ụlọ," Danny gwara ya mgbe e mesịrị.
Nke ahụ bụ oge ahụ, ka Charlotte kwuru, mgbe "m gafere ahụ m. Ana m eleda ihe niile anya. Ahụrụ m ka ha na-arụ m ọrụ n’elu akwa. Ahụrụ m Danny ka ọ kwụ n'akụkụ. "
Ma wee bia uto mara nma.
“Nke kasị mara mma na ọmarịcha isi, dị ka ihe ọ bụla emetụbeghị mbụ. Abụ m onye Ifuru; Ahụrụ m okooko osisi n'anya, enwerekwa ifuru ndị nwere nwere isi a nke ị na-enweghị ike iche n'echiche.
Ifuru ahụ bụ akụkụ nke ihe mere na mberede pụtara tupu ya emee. Ọ sịrị, "Chineke kpọgara m n'ebe karịrị ihe m tụrụ anya ya." M meghere anya m abua ma jua anya. E nwere ọdọ mmiri, mmiri mmiri, ugwu nta, ala ndị mara mma. E nwekwara egwu kachasị mma, dịka ndị mmụọ ozi na-abụ abụ ma ndị mmadụ soro ha na-abụ abụ, na-atụrụ ndụ. Ahịhịa, osisi na okooko osisi na-eji egwu egwu ka oge na-aga. "
O we hu ndi-mọ-ozi. Otutu ndi mo ozi di, ma ndi a buru ibu, ma nku ha di nkpa. Ha ga-eku nku nku ma bulie ya, m wee nwee mmetuta ikuku na ihu m site na nku nke ndị mmụọ ozi, "ka o kwuru.
You mara, anyị niile atụleela ihe elu-igwe ga-adị. Mana nke a ... nke a bụ otu nde ji karịa ihe m nwere ike iche n'echiche, "Charlotte kwuru. "Ahapụrụ m isi."
Mgbe ahụ, ọ hụrụ "ọnụ ụzọ ọla edo, na karịa ha, guzo na-amụmụ ọnụ ọchị na-ekele m, enwere nne m, nna m na nwanne m."
Nne Charlotte, Mabel Willbanks, dị afọ 56 mgbe ọ nwụrụ site na nkụchi obi. Nwanne Charlotte, Wanda Carter, gbara afọ 60 mgbe ọ nwere nkụchi obi wee nwụọ n'ụra ya. Nna ya, Hershel Willbanks, ebirila afọ 80 na ụma mana mechaa nwụọ "ọnwụ nwute nke ukwuu" site na nsogbu ngụgụ, o kwuru.
Mana n'ebe ahụ, ha nọ na-achị ọchị na nso ọnụ ụzọ ọla edo, ha dị ka ha nwere obi ụtọ ma gbasie ike. Ha enweghị iko ọ bụla dị ka ha dị afọ iri anọ. Ha nwere obi ụtọ ịhụ m, ”Charlotte kwuru.
E nwekwara nwanne nne ya bụ Darrell Willbanks, onye bụụrụ ya nwanne. Darrell merụrụ otu ụkwụ tupu ọ nwụọ n'ihi ọrịa obi. Mana lee, ọ guzoro n’ụkwụ abụọ dị mma ma jiri obi ụtọ na-ekele ya.
Ìhè nke na-enweghị isi nke dị n’azụ ndị ọ hụrụ n’anya na nnukwu ìgwè mmadụ ndị ha na ha guzo. Charlotte ji n’aka na ọkụ ahụ bụ Chukwu.
Ọ tụgharịrị isi ya iji chekwaa anya ya - ọkụ ahụ gbara oke - mgbe ihe ọzọ dọtara ya. Ọ bụ nwata, nwata. Ọ sịrị, "Ọ bụ ebe ahụ n'ihu mama m na papa m."
Obere oge, Charlotte nwere mgbagwoju anya. Wasnye bụ nwata nwoke ahụ? o juru ya anya. Ma ozugbo ajụjụ ahụ batara n’obi, ọ nụrụ ka Chineke zara ya.
Ọ bụ ya na nwa Danny, nwa ahụ tụbara afọ 40 gara aga mgbe ọ dị ime ọnwa ise na ọkara.
“N'ihi ya, ha ahapụghị gị ka ị debe nwa ahụ ma ọ bụ lie ya mgbe i tee ime ahụ ogologo oge. Naanị ha kwadoro ya wee sị, "Ọ bụ nwa." Ma nke ahụ bụ ihe niile. Emechara ya. Anọgidere m n’ogologo nnukwu nkụda mmụọ mgbe a mụsịrị nwa ahụ, na-enwe olileanya na m ga-egbochi ya, ”ka o kwuru.
Hụ nwa ya nwoke ka ya na ndị mụrụ ya guzo, ọ sịrị, “Apụghị m ichere ka m debe ya. Etufuola m ya. "
Ọ dị ịtụnanya. Ma gafere n'ọnụ ụzọ ọla edo, ọ nụrụ ka Chineke na-asị, "Nabata n'ụlọ."
“Ma mgbe ahụ, atụpụrụ m isi m n'oké ọkụ ahụ ọzọ wee lefee ubu m. Enwere Danny na Chrystal na Brody na Shai, ”o kwuru na-ezo aka na nwa nwanyị Danny Chrystal Meek na ụmụ ya ndị okenye Brody na Shai. “Ha bere akwa, o wee tiwa m obi. Anyị maara na n’eluigwe enweghi ihe mgbu, mana enwebeghị m ọnụ ụzọ. Anọghị m ebe ahụ. Echere m echiche banyere etu m si chọọ ka Shai alụọ nwunye na Brody lụọ nwunye iji jide n'aka na ha dị mma. "
N'oge ahụ ọ nụrụ ka Chineke na-agwa ya na ya nwere nhọrọ. I nwere ike nọrọ n'ụlọ ma ọ bụ laa. Ma ọ bụrụ n’ịlaghachi azụ, ị ga-akọ akụkọ gị. Have gha ịkọwa ihe ị hụrụ ma kwuo ozi m, ozi ahụ bụkwa na m na-abịa n'isi ụka, nwunye m, ”ka Charlotte kwuru.
N'oge ahụ, mgbe Danny nọ na-ele ndị nnapụta na-aga n'ihu mkpakọ obi, ọ nụrụ ka otu n'ime ha na-ajụ, "Paddles?" doro anya na-ezo aka electro-ujo defibrilator.
Ọ nụrụ ka onye njikwa ahụ na-ekwu ee e, kama ọ na-enye ya ụdị n'ụdị a. "Mgbe ahụ o kwuru na otu nwoke na-abịa ọsọ, ha na-enyekwa m ohere ịgba, na ebe nlegharị anya ọ hụrụ na ọbara mgbali m na-agbada," Charlotte kwuru.
Ọzọkwa, Danny gwara ya mgbe e mesịrị, ọ hụrụ ka otu n'ime Charlotte n'anya dara, "amakwaara m na ị ga-abịakwute m."
Charlotte anwụọla nkeji iri na otu.
Mgbe o rutere, ọ malitere ibe ákwá. Danny jụrụ, "Mama, ị na-akpasu onwe gị iwe?"
Charlotte kwara ya n'isi. O we jua si, “you kuru isi ndia?”
Danny ezigala ozi na Chrystal ozugbo Charlotte kwụsịrị iku ume, Chrystal chikọtara ụmụ ya, ha niile agbaala ọsọ gaa Springfield, na-abịa n'akụkụ Charlotte ka a na-akpọbata ya n'ụlọ ọgwụ.
Mgbe ọ hụrụ Chrystal ka ọ na-abịakwute ya, ihe mbụ Charlotte gwara ya bụ, "younu nwere ifuru ahụ?"
Chrystal chigharịkwuuru nna ya wee sị, "Huh?"
Danny amaa jijiji. Ọ sịrị, "Amaghị m." "Ọ na-ekwu na ọ na-esi ísì dị ka okooko osisi."
Charlotte nọrọ n'ụlọ ọgwụ izu ole na ole ma n'oge ahụ “Apụghị m ịkwụsị ikwu banyere ya. Enwere m ọkụ a na ndụ m na mkpụrụ obi m. Ekwesiri m ịhụ ihe pụrụ iche na m ga-agwa ndị mmadụ. Eluigwe dịla otu nde karịa ka ị pụrụ iche n’echiche. M na-akwụsị ndị mmadụ ebe a na-ere nri. Akwụsịrị m onye na-ezigara post m ozi ma gwa ya. Abụghị m onye ihere. Achọrọ m ịkekọrịta akụkọ a ebe m nwere ike. "
Mgbe ọ nọ n’eluigwe, o chere na Chineke na-agwa ya na mgbe ọ ga-alọta, ọ ga-ahụ ndị mmụọ ozi. “N'ime ọnwa gara aga, amalitere m ịhụ ha. Ahuru m ndi mmụọ ozi nche n’azụ, ”ka o kwuru.
Charlotte abụwo Onye Kraịst ji okpukpe kpọrọ ihe. Ya na Danny so na ndị otu na-enye egwu maka Mammoth Assembly of God. Ma ugbu a, karịa ihe ọ bụla, ihe kachasị masị m bụ ime bụ ikpegara ndị mmadụ ekpere. Danny wuru ụlọ ebe m na-ekpe ekpere. Know mara ma o teta n'ụra elekere atọ nke n'ụtụtụ, aga m apụ, ọ bụ ebe m nọ. Ọ dị m mkpa nke ukwuu, n'imekwa nke a, anụwo m ọtụtụ ndị ọzọ ịgba akaebe ha. "
Charlotte kọrọ akụkọ ya n'ọtụtụ ụka na nzukọ ọgbakọ dị iche iche na mpaghara ahụ.
Agaghị m akwụsị ikwu ya. Ma enwere ọtụtụ ihe na akụkọ ahụ. Achọghị m ka ndị mmadụ chee na m na-agba ara - adịghị mma, anaghị m echegbu onwe ha ma ọ bụrụ na ha chere na ara adịghị m mma. A mara m ihe nke Onye-nwe gosipụtara m, enweghị m ike ịkwụsị ịsị etu Chineke si dị ebube ma na-eme ebere.
Ihe edepụtaraIhe omimi
← Na post gara aga Gara aga post:Ozi nke Jisos nyere, Mee 2, 2020
Ọzọ Post → Post ozo:Rome: Antonio Ruffini nwoke nwere onyinye nke stigmata